Yonke imihla kulula ukunika inkxaso yobugcisa ukuba uthatha inzuzo enikezelwa luqhagamshelo lwe-Intanethi kunye neenkqubo zokufikelela kude. Eli nqaku licacisa ukuba yintoni iTeamViewer kunye nendlela yokuyisebenzisa kwi…
Ngayiphi na indleko kuthi ukufumana itafile yokudweba ngaphandle kweofisi ... Ngaba abaqulunqi kufuneka babuyele kweso sikhundla? Lo mbandela uxoxwe kumgangatho jikelele, kwaye akukho sizathu. Ndiqinisekile…
Emva konyaka kunye nesiqingatha sokusebenza kwi-Acer Aspire One, ukwenza i-CAD / GIS kwinqanaba loqeqesho, ukuthumela, ukuyila kwegraphic kunye nokukhangela, apha ndishwankathela okona kubaluleke kakhulu. Ngenkcukacha ebethetha ngezine...
Kule veki, ngaphandle kokulinda i nanny entsha yabantwana bam, ndiye ndanethuba lokudibana nomhlobo wam ophuma kwibhlog owandiqhagamshelana nam phambi kokuza kula mazwe wandixelela ukuba ufuna udliwano-ndlebe emva kwexesha...
Ukuvala lo nyaka, oyenye yezinto ezininzi ezingaqhelekanga, ndishiye ukuninqwenelela impumelelo ka-2011 apho siya kuba kuninzi esinokukwenza. Kwabo bafunda le bhlog ngaphezulu kwama-299 amangeno adlulileyo, esi sithuba sininzi kakhulu, kwabo…
Ndifuna ukudibanisa itheyibhile ye-Excel kwimephu kwifomathi ye-shp. Itheyibhile iya kuguqulwa, ngoko andifuni ukuyiguqulela kwifomati ye-dbf, okanye ndiyibeke ngaphakathi kwendawo yolwazi. Umthambo olungileyo wokubulala ukonwaba…
Emva kokusebenza, enye yezitshixo ibonakala ibambelele, ndicinezela ngokukhawuleza kwaye ayibhali, idinga uxinzelelo olunamandla. Wow, hayi indlela ekucaphukisa ngayo ukuba nesitshixo esinje, kwiikhibhodi eziqhelekileyo bekulula ukuthenga esitsha...
Ndisandula ukubuya kukhenketho lwam, phakathi kwezidlo zaseCreole, uxinzelelo lokufaneleka kwiNdebe yeHlabathi kunye nokwaneliseka komsebenzi, apha ndikushiya isicatshulwa samabinzana angenakulibaleka orhwebo. Abacebisi: -Khawuleza! -ukucoca incoko! Abazobi:...
Sele sibonile ngaphambili indlela yokusombulula ingxaki yesandi se-Acer Aspire One, ngoku kwafuneka ndilwe nzima kuba ngokukhawuleza kwakungenakwenzeka ukudibanisa kwi-Skype, ngokukhawuleza. Kutheni ndisebenzisa iSkype ekuqaleni ndangena njenge-hobbyist kodwa emva koko…
Ikulungele ukukhuphela i-gvSIG 1.9 RC1, inguqulelo yokuqala yokuhanjiswa komviwa (uMviwa wokuKhululwa) ukusuka ku-Build 1243 ka-Agasti 313. Ukukhuphela kuthathe ixesha, kuba ekuqaleni i-gvsig.org yayiphumile enkonzweni, isuka phi...
Ushicilelo lwe-Agasti lwe-Maximum PC lube lukhulu, lubiza kakhulu kunezinye zezinga layo (i-$ 9 e-US kunye ne-$ 12 kwamanye amazwe), nangona ukubhalisa kuyo kubiza i-$ 25 kuphela ngonyaka, kunye ne-12 editions. Kamva...
Izolo bendithetha ngokuphambana kweMicroCenter, ngoku ndifuna ukwenza uluhlu lwezinto endizifumene zihlawuleka. Ngokubanzi amaxabiso awekho phantsi kakhulu xa kuthelekiswa nalawo afumaneka kwilizwe lase-Hispanics, kodwa…
Umahluko wolu hambo kukuba ngaphandle koqeqesho endiluthathileyo iintsuku ezininzi ukutshintshela iiholide zam, oko kundinika ixesha lokundwendwela umhlobo kaGoogle Earth, ohlala kufutshane nekomkhulu le…